KETSANA(17W) ၃၆ နာရီအတွင်း ဗီယက်နမ်သို့ဝင်မည် | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
KETSANA(17W) ၃၆ နာရီအတွင်း ဗီယက်နမ်သို့ဝင်မည်
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားလျှက်ရှိသော အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KETSANA(17W) သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဒါနန်းမြို့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၃၄ဝ ခန့် တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၈ မိုင်နှုန်းဖြင့် ဆက်လက်၍ ရွေ့လျားနေပါသည်။ ၄င်း မုန်တိုင်းသည် လာမည့် ၂၄ နာရီ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝဝ၃ဝ နာရီ SEP28-1800 GMT တွင် အင်အားအဆင့်-၁ (CAT-1) သို့ ရောက်ရှိပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဒါနန်း အရှေ့ဘက် ၁ဝ၄ မိုင် ခန့်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မုန်တိုင်းသည် CAT-1 အဆင့်ဖြင့် လာမည့် ၃၆ နာရီအတွင်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ HUE မြို့ နှင့် DANANG ဒါနန်းမြို့ ကြားမှ ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
မုန်တိုင်း၏ပမာဏကြောင့် တရုတ် – ဟိုင်နန်ကျွန်းသို့လည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted in Education, Weather Alert, Weather News. Tags: KETSANA, tropical-storm, weather. LeaveaComment »
« KETSANA(17W) ပြီးလျှင် (18W) လာဦးမည်လော?